Tianjin DA Yu plastika VOKATRA CO., LTD.
Tianjin DA Yu plastika VOKATRA CO., LTD., Hifantoka amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny valves-valves-fanondranana nanomboka tamin'ny 2009, dia miorina ao Baodi District, Tianjin, avaratr'i Shina. ny 75KM ny Tianjin seranam-piaramanidina, ary tokony ho 90km any Tianjin Xin Gang seranana, fitaterana no tena mety.
Amin'izao fotoana izao, dia manana tanteraka rafitra famokarana sy ny kalitao, CNC lathes sy ny fanodinana foibe, afaka hihaona ny zavatra ilain'ny CNS, Jis, BS, ANSI, Din fitsipika. Hatreto, ny orinasa dia nanome isan-karazany ny vokatra, toy ny lolo valves, jereo valves, diaphragm valves, vavahady valves, baolina valves, ny PVDF, CPVC, UPVC, ABS, FRPP na PPH fitaovana dia nanipy Iron, Stainless Steel ara-nofo , ary ny valves dia misy amin'ny actuators, ary koa manome flanges, sodina Fittings, hafa mifandray vokatra sy ny fanompoana OEM nanatitra.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny rano-mifandray tetikasa sy ny injeniera, fambolena fitarihan-drano, maloto anananao, ka aquiculture, Aquarium, orinasa simika, fanamboaran-tsambo, levitra orinasa sy ny dobo filomanosana, Zoo, ny rano sy ny valan-javaboary an-tsaha hafa. Ary ny vokatra efa naondrana tany amin'ny firenena 60 sy faritra tahaka an'i Azia Atsimo Atsinanana, ny Afovoany Atsinanana sy Andrefana Eoropa, rehefa tena nidera ny mpanjifa.
Avo bola nitsangana teo, tsara kalitao ny vokatra, fanompoana matihanina rafitra, mifaninana Price politika, haingana fanaterana antoka, dia tena manantena fanorenana ny tranon'omby maharitra stratejika fiaraha-miasa amin'ny orinasa-baraka.
Valves rehetra sy ny sodina Fittings dia vokatry ny marika-vaovao fitaovana tsara.
Habeny rehetra misy, habeny from 1/2 "ny 20".
Fitsipika rehetra dia misy toy ny Din, Jis, ASTM / ANSI, BS, Taiwan.
OEM & FREE LOGO dia azo ekena